Global Voices teny Malagasy » Rakotra marijuana ny lalana mankany amin’ny fahaleovantena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Septambra 2018 16:28 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Miranah
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Lalàna, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Ny Tetezana - The Bridge
Nampidirina tao Trinidad sy Tobago sy ny sisa ao Karaiba miteny Anglisy nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany avy amin'ny governemanta zanatanin'ny satro-boninahitra  ny fandraràna ny cannabis—na marijuana, zava-maniry manana endrika maina araka ny ahafantarana azy. Nohamafisina tamin'ny fanasoniavana ny Fifanarahana tokana iraisam-pirenena momba ny zava-mahadomelina tamin'ny taona 1961 izany, dina iraisam-pirenena mandràra ny famokarana sy famatsiana rongony (zava-mahadomelina), sy ny rongony misy vokany mitovy amin'izany (maha-domelina) raha tsy hoe eo ambany fahazoan-dàlana ho amin'ny tanjona manokana, toy ny fitsaboana sy ny fikarohana.
Ankehitriny, satria mankalaza ny faha-56 taonan'ny fahaleovantenany  i Trinidad sy Tobago, mbola ampiasaina io dina io sy ny tohiny rehetra ho sakana amin'ny karazana fanavaozana ho ara-dalàna amin'ny lalànanay ny rongony, anisan'izany ny fanasokajian'ny sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana ny cannabis ho rongony Sokajy I. Ka na dia ny fivarotana rongony tsy ara-dalàna aza dia miteraka fahavoazana ao amin'ny firenena, miteraka fahafoizana aina an-jatony sy manolikoly ny polisy, ny mpiambina morontsiraka, ny hery fiarovana, ary ny manampahefanan'ny ladoany. Na dia an-jatony maro aza no maty vokatry ny homamiadana mifandraika amin'ny fomba fiainana ara-indostrialy/fanjifana tafahoatra, dia an'arivony ireo voasambotra sy nogadraina noho ny fihazonana cannabis raha mirodana kosa ny rafi-pitsarana mpanao kolikoly ary tototry ny asa (raharaham-pitsarana marobe).
Taorian'ny fifidianana ankapobeny farany tamin'ny taona 2015, samy namaly ny fanontaniana momba ny tsy fanasaziana ny cannabis na ny praiminisitra ankehitriny ao Trinidad sy Tobago, Dr. Keith Rowley, na ny teo alohany, Kamla Persad-Bissessar, tamin'ny filazana fa avelan'izy ireo hosahanin'ny vondrom-paritra CARICOM , izay nametraka ny Vaomieram-Paritra misahana ny Marijuana  tamin'ny taona 2014 izy ireo.
Anisan'ireo mpitsabo malaza indrindra eo amin'ny sehatr'izy ireo tsirairay avy ireo mpikambana ao amin'ny vaomiera, tarihan'ny Profesora Rose-Marie Belle Antoine , zokiny indrindra ao amin'ny Fakiolten'ny Lalàna ao amin'ny oniversite West Indies. Ny Profesora Wendell Abel, dokotera mpitsabo saina ao amin'ny Hopitaly Oniversiten'i West Indies sady lehiben'ny sampana fitsaboana ara-tsaina ao amin'ny Fakiolten'ny Siansa ara-pitsaboana ao amin'ny Oniversite Jamaica ao West Indies no filoha lefitra. Niasa tamin'ny sehatry ny fahasalamana ara-tsaina nandritra ny taona maro tany Jamaika sy Karaiba ny Profesora Abel ary nahazo mari-pahaizana momba ny Fahasalamam-bahoaka tao amin'ny Oniversiten'i Johns Hopkins, ankoatra ireo fahaizany hafa. Namoaka toko marobe tamin'ny boky, lahatsoratra ara-teknika sy lahatsoratra an-gazety mifantoka amin'ny resaka fahasalamana ara-tsaina sy ny politika ara-pahasalamana toy ny famonoan-tena, ny fahaketrahana sy ny tolotra ara-pahasalamana momba ny saina ho an'ny fiaraha-monina ny profesora Abel. Izy no lohalaharana tamin'ny fikarohana lehibe tao Karaiba mikasika ny fiantraika ara-pahasalamana avy amin'ny cannabis. Vaomiera iray hafa i Esther Best, mpitantana ny Filankevi-pirenena misahana ny rongony ao Trinidad sy ny paikady ary ny politikan'ny rongony ao amin'ny firenena. Nisolo-tena ny firenena sy ny faritra tamin'ny resadresaka lehibe iraisam-pirenena momba ny fanavaozana sy ny politikan-drongony ihany koa izy.
Namoaka ny tatitra farany  ho an'ny vahoaka ny Vaomieram-paritra tamin'ny 3 Aogositra. “Rehefa avy nolanjalanjaina ny lahatahiry ara-tsiantifika sy ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny vahoaka, dia nahita ny Vaomiera fa ambony kokoa noho ny loza aterany ny tombontsoa ara-pitsaboana azo avy amin'ny cannabis/marijuana eo amin'ny sehatra maro, hoy ny tatitra. Araka ny tatitra, izay mitondra ny lohateny hoe “Miandry fifohana—miaro ny hoavintsika amin'ny alàlan'ny politikam-pandraisana andraikitra ara-politika sy sosialy momba ny marijuana”:
Tsara toerana ny governemantan'i Trinidad sy Tobago mba hitrandraka ny fahaiza-manaony lehibe ara-teknika sy ara-potodrafitrasa ao amin'ity firenena mpamokatra solika sy etona ity mba ho lasa mpitarika sy mpiantsehatra goavana eo amin'ny indostrian'ny cannabis sy ny rongony manerana an'i CARICOM. Manana ny fepetra rehetra sy ny fahaiza-manao rehetra ilaina amin'ny fiaraha-miasa ara-teknika sy ny fambolena ny habetsaky ny cannabis sy rongony isika ao anatin'ny CARICOM. Ary tsy manam-paharoa ho an'ity faritra ity ny hetsika ara-pinoana sy ara-tsosialy indizeny efa ho zato- taona, —ny Rastafari —izay mitàna anjara andraikitra fototra ny marijuana, hetsika izay nizaka mafy ny vokany tamin'ny fomba tsy ara-drariny ireo mpikambana ao aminy. Ny indostrian'ny cannabis natsangana dia afaka mahafeno ny filàn'ny vahoaka, mamorona vokatra azo vidiana izay azo amidy ao anatin'ny faritra maro (nutraceutiques, taratasy miloko, sns.), mamorona asa ary manondrotra ny fari-piainana ho an'ny sarangan'ny mpiasa sy ny olona atao an-jorombala ao amin'ny faritra. Ho hetsika tena mahaleotena izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/06/125532/
 zanatanin'ny satro-boninahitra: https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_colony
 fanakatonana tampoka : https://newsday.co.tt/2018/08/28/no-title-19/
 Vaomieram-Paritra misahana ny Marijuana: https://caricom.org/marijuana-commission
 tatitra farany: https://caricom.org/marijuana-commission/view/final-report-report-of-the-caricom-regional-commission-on-marijuana